I-China I-Wristbands ye-PVC ethambileyo kunye nezacholo mveliso kunye nabenzi | SJJ
Amabhanti e-PVC ezithambileyo afanelekile kubantu abadala okanye abantwana kuzo zonke iintlobo zezihlandlo. Iibhanti zewayini zeSoftware ezenziwe ngePVC zenziwe ngezinto ezithambileyo zePVC ezinobumba bokufa. Izinto eziphathekayo zithambile, ziguquguquke, zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala ixesha elide. Ubungakanani obuqhelekileyo ngama-220 mm kubantu abadala okanye i-190 mm yabantwana, ngelixa ubungakanani obuhleliweyo ...
Amabhanti e-PVC ezithambileyo afanelekile kubantu abadala okanye abantwana kuzo zonke iintlobo zezihlandlo. Iibhanti zewayini zeSoftware ezenziwe ngePVC zenziwe ngezinto ezithambileyo zePVC ezinobumba bokufa. Izinto eziphathekayo zithambile, ziguquguquke, zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala ixesha elide. Ubungakanani obuqhelekileyo ngama-220 mm kubantu abadala okanye i-190 mm yabantwana, ngelixa ubukhulu obulungelelanisiweyo bufumaneka ngokukhupha isikhunta esitsha ngexabiso elincinci. Zonke iintlobo zezitayile zebhanti ezithambileyo ze-PVC ezinje ngeebhanti zentsimbi, izacholo, amabhanti angenangqondo, ii-slap wristbands, iiwotshi kunye neminye imisebenzi enemihombiso eyahlukeneyo ithandwa kwihlabathi liphela. Iilogo ngentando yakho babebhala, debossed, umbala ezaliswe, eshicilelweyo okanye laser ukroliwe. Iziphumo ze-2D kunye ne-3D ezinamalungu anemibala zibalasele ekubonakaliseni amabakala eelogo zakho, kwaye wenze ukuba uyilo lwakho luphile ngakumbi kwaye licace. Akukho MOQ inqongopheleyo, ixesha elifutshane lemveliso, ukhuseleko olukumgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungileyo ziluncedo lwethu ukukunceda ngakumbi. Iibhanti zethu zewayini ze-PVC ezithandekayo kunye namasongo aneelogo zakho ezenziwe ngokwezifiso kunye nemibala eyahlukeneyo yokudibanisa ziya kuhlangabezana neemfuno zakho kubantu abadala okanye abantwana beebhanti zentsimbi kunye nakwiimarike zebhanti ezandayo.
Ukugqiba: IiLogo zingaprintwa, zifakwe ebhodini, zilahlwe ngaphandle kwemibala, zenziwe ngombala ogcwalisiweyo, kwaqoshwa i-laser kwaye ke akukho
Ukhetho oluQhotyoshelweyo oluqhelekileyo: AKUKHO zincamathiselo ekuxhaseni okanye kwiziqwenga zentsimbi zeebhendi zempama
MOQ: Akukho MOQ inomda, ubuninzi, amaxabiso angcono
Egqithileyo Iifayile zePVC zePhepha
Okulandelayo: Ifayibha yeSoftware yePVC
Amabhanti eBelt eBelt